Nna-ukwu mara mma: West Baden | Martech Zone
Nkuzi ndi oma: West Baden
Satọdee, Nọvemba 21, 2009 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Di m, onye okike na onye okike nwere ọgụgụ isi Steve Nealy (nkwụnye ihere), m nọrọ ụbọchị ole na ole n'izu a na West Baden Springs Hotel dị na ndịda Indiana. Ka m kwuo tupu m banye n'ime anụ nke a na ọ bụrụ na ị bi n'ime ụgbọala (ma ọ bụ karịa karịa) nke ụlọ nkwari akụ a na ndị ọzọ Ebe nkiri French Lick Springs na ahụbeghị ya (ma ọ bụ ọbụlagodi na ịnwere), ị ga-eleta. Ọ mara mma.
Dị ka a marketer na ika strategist, masịrị m nke ukwuu na tinye uche na akara ha. Hotelslọ oriri na nkwari akụ abụọ ahụ nwere akụkọ ihe mere eme nke gụnyere nleta nke ndị isi niile, gụnyere ndị isi nke United States, ndị bịara ebe egwuregwu a bara ụba na mmalite 1900s. Na nso nso a eweghachiri na ịma mma mbụ ha, ha ewepụghị nkọwa zuru ezu n'ịkọwapụta ihe akụkọ ihe mere eme nke ika ahụ mgbe ọ na-egbo mkpa nke ndị njem nke oge a. Dịka ọmụmaatụ, nnyefe ikuku na West Baden Springs Hotel enweghị ntụpọ. Enweghị m inye pint ọbara ma ọ bụ nye $ 10 kwa ụbọchị iji banye. Ekwesiri m ikwenye na usoro ojiji otu ugboro ma enwere obere MacBook Pro na-enwe obi ụtọ site na ụlọ ahụ.
Best niile, m ika strategist obi ama ama ama site na-aga n'ihu ika doo m nwetara na onye ọ bụla n'aka. Ọ bụla otu ọrụ anyị bịara na kọntaktị na bụ a na-eje ije na-ekwu okwu nnọchiteanya nke ika. Onye ọ bụla nyere ụfọdụ akụkọ ihe mere eme ma nwee obi ụtọ karịa igosi anyị gburugburu yana ịtinye aro ndị ọzọ ka anyị wee ghara ịlafu ọtụtụ ihe anyị nwere ike ime.
Enwere m ike ịga n'ihu na ọtụtụ nkọwa nke jikọtara akara a mere nke ọma. Isi okwu m bụ na ha na-arụ ọmarịcha ọrụ na akara ha, na-ele ihe ọ bụla na-ahụ anya na nke a na-adịghị ahụ anya na cranny iji mee ka ndị ha sikwuo ike na ihe ha guzoro. Ọ bụghị naanị ire ya ka ha mere tupu ire ma ọ bụ ebe a na-ere ya. Ha lared anyị na ika mgbe ire… mwube onwe ha maka ịgha ahịa ahịa, nloghachi ịzụrụ na ọnụ ahịa ndị ahịa ka ukwuu. O yiri ka enwere nkuzi na ya maka anyi niile.
M hapụrụ izu ike, ịchọ mma ma dị njikere ịlaghachi n'oge mbụ. Mara mma mara mma, West Baden Springs Hotel na French Lick Springs Resort. Bravo!
Tags: mbọnhotelọdịda anyanwụ
Not Bụghị Onye Ọrụ Gị
Nov 28, 2009 na 7:01 AM
Daalụ maka ịkekọrịta nke a. Afọ ole na ole gara aga, arụrụ m Cook Medical ọrụ na Bloomington. Companylọ ọrụ ahụ (ma chee na ha ka na-eme ya) oriri ụlọ ọrụ kwa afọ na West Baden. Thelọ ahụ dị ịrịba ama. Mgbe ị gara, hụ na ị ga-ewerekwa na ala na ubi. Kpamkpam kwesiri njem ahụ.